Yusuf Garaad: Guddoomiyaha ha loo Garaabo
Laba fadhi ayaa baarlamaanka laga benneday in uu howshiisa guda galo. Waxyaabo kale oo kharriban ayaa iyaguna dhacay.
Koox ayaa soo qaadatay waraaqo iyo calaamado ay ku qoran yihiin erayo ay muuqato in ajnebi lagula hadlayo oo aan ku macneyn lahaa Codkayagu iib ma ahan.
Kooxda kale oo arrintaa ka xanaaqsan waxay adeegsatay saxaafadda waxayna ku eedeysay kooxda buuqa sameyneysaa in ay tahay laaluush qaatayaal la yaqaan.
Marka aad isku darto codka labada dhinac wuxuu markhaati u noqonayaa hadalkii ay markii hore Xildhibaannadu ka xanaaqeen ee ka soo yeeray Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay. Wuxuu sarbeebay in uu walaac ka qabo in codadka Mudanayaasha Baarlamaanka qaar la iibsado. Hadalkaas markii uu soo baxay aad ayay uga caroodeen waxayna ku eedeeyeen in uu u gefey Baarlamaanka Soomaaliya.
Hadda waxay u muuqata in hadalkii uu saray ay ayagu saafeen.
Guddoomiyuhu kuma faraxsanaan karo eedeymaha labada dhinac isu jeediyeen iyo buuqa ka dhacay gudaha Baarlamaanka.
Waan qiyaasi karnaa in culeyskaa uu Guddoomiyaha u dheer yahay cadaadis uga imaan kara Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha. Sidoo kale labada dhinac ee Baarlamaanka ee aan iyagu is qaban laakiin la kala safan Madax is qabatay.
Guddoomiyaha waxaan shaki ku jirin in uu kulammo la qaatay wakiillo ka socda Dowlado kale oo arrinta daneynaya, taas oo iyaduna ka mid noqneysa cadaadiska isaga saaran.
Haddana in loogu daro eedeymaha dhinacyada qaar ka yeeraya ee ah in la rabo in isaga laga keeno mooshin loo bixinayo ka-caga-jiidis mooshin meesha ma qabato.
Waxaan u baahan nahay in aan fahamno culeyska saaran Guddoomiye Jawaari. Sidaa darteedna waa in aan u garowno.
Waxaan hubaa in uu og yahay in haddii arrinta dib uun loo sii dhigo iyada oo aan xal kale laga shaqeyneyn, in waxa keliya oo ay dhali kartaa ay tahay in cadaadisku uu sii bato. Waxa keliya oo furan waa laba mid. In arrinta si uun meel looga neefiyo. Iyo in lagu dhiirrado oo la guda galo.
Marka aan Guddoomiyaha ka yareyno buuqa, eedeynta iyo cadaadiska si uu u helo dariiqa ugu habboon ee sharci ah ee Baarlamaanku uga gudbi karo caqabaddan.